Nnukwu echiche adịghị mkpa | Martech Zone
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 2, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Rụ ọrụ na ndị ọchụnta ego na-aga nke ọma n'afọ ole na ole gara aga abụwo onye na-emeghe anya m. M na-abụkarị onye na-eche echiche, mana m na-ele ka ndị ọzọ na-egbu echiche ndị ahụ wee nwee ọganiihu karịa m.
Ngwakọta bụ otu n'ime echiche ndị ahụ dị ịtụnanya - ma ugbu a ọ bụ ụlọ ọrụ na-abawanye nha afọ karịa afọ. Otú ọ dị, ọ bụghị okpukpu abụọ n'ihi echiche ahụ. Ọ dị okpukpu abụọ n'ihi na Chris Baggott na Ali Sales gburu echiche ahụ.
N'afọ gara aga, ana m agbasi mbọ ike, site n'enyemaka nke Chris na Ali, iji wulite ikike m nwere igbu. M na mgbe ihe ịga nke ọma na-eweta echiche n'ime a na-arụ ọrụ ihe ngwọta - ma siiri site n'oge ruo n'oge na prioritizing. Ọtụtụ mgbe, ọ na-abụ ihe m na-adọpụkarị uche m karịa ihe kacha mkpa.
Na azụmahịa, a na-adọpụ uche gị nke ukwuu. Ndị ahịa na-anaghị akwụ ụgwọ ma na-atụ anya ihe ọzọ. Ebugharị site na atụmatụ ndị na-eri gị oge mmepe bara uru, mana emebeghi azụmaahịa gị. Ọ bụrụ na nsogbu ndị ego agbasasị gị, ọ ga-eme ka ụzọ gwụchaa. Uche ndị ahịa na-adọpụ uche ha bụ naanị ndị na-achọ ọdịmma ha kama nke azụmahịa gị. Ndagharị ndị ọrụ na-anaghị atụru anya. Ihe ndị a niile na-adọpụ uche gị n’ọrụ ime ihe.
Chris na Ali zụtara m akwụkwọ dị egwu mgbe m malitere DK New Media, Etu ị ga-esi enweta ọgaranya: Otu n’ime ndị ọchụnta ego n’ụwa kacha elu na-ekpughe ihe nzuzo ya, nke Felix Dennis dere. Ọ bụghị ụdị akwụkwọ ị na-eche maka ya - ọ bụ n'ezie ọhụhụ dị ukwuu banyere etu Felix si baa ọgaranya na ihe ọ na-ekwu banyere ndị ọzọ. Nke a bụ obere abụ uri mara mma nke ọ ga-emepe akwụkwọ a:
Otu esi enweta ego
Isi ọma? Nke bụ́ eziokwu bụ
Ka ị na-eme,
Ike ọsụsọ gị,
Ochioma ị nwetara.
Echiche? Anyị enweela 'em
Ebe ọ bụ na Iv duhiere Adam,
Mana nara m ya
Mmezu bụ isi.
Ego ahụ? Naanị pester
a eleghị anya ọorụ.
Iji nweta ihe ị chọrọ
To na-akwadebe anyaukwu.
Ọ bụ talent? Gaa tinye ya.
Ma mbụ, mmanya na-eri ya.
Ọ bụ ọrụ na-agwụ ike
Na a talent jerk.
Ezigbo oge? Iji merie ya
Ikwesiri ịnọ na ya.
Dị nnọọ ga-anọ ọdụ
Quithapụ ma ọ bụ bee nri idide.
Mgbasa? Ọ bụ ihe efu!
Uru bụ isi zuru oke.
Na-arịọ arịrịọ n’elu
Na-eje ije n'ụkwụ abụọ.
Nzọụkwụ mbụ? Naanị mee ya
Meekwa ka ụzọ gị gabiga ya.
Nnukwu echiche enweghị isi belụsọ ma ị nwere ike mezuo ya. N'ebe a na Indianapolis, enwere m ike igosi ụlọ ọrụ ole na ole bụ (ma ọ bụ) echiche ọjọọ - mana ụlọ ọrụ natara onyinye ma ọ bụ ego dabere na ikike ndị isi ime ihe ahụ. Hmmm… mezuoive = mezuoe? Enweghị asusu ebe ahụ!
N'ime ọnwa ndị na-abịanụ, m ga-arụsi ọrụ ike ịkwado kalenda m na ọrụ m iji hụ na m nwere ike ịbawanye uto nke DK New Media. Chọpụta - apụrụ m iwere ọtụtụ nkwekọrịta $ 500 na izu ole na ole sochirinụ ma bie ndụ dị mma. Otú ọ dị, M nwere ike na-arụ ọrụ ike iji nweta $ 25k contracts n'okpuru m belt, hụ m ogologo oge ịga nke ọma, na-eme ka ihe strategive mmekọ na m na-arụ ọrụ na ọtụtụ obi ụtọ.
Ihe niile na-egbu. Nnukwu echiche adịghị mkpa.
Tags: Krismascms iphone ngwaokpuGitHubibm logoChọọ MarketingEdozi 360
Amaara m ihe mgbu gị banyere ịbụ echiche nwoke. Adị m oghe ma dị njikere mgbe niile inye aka, nke na-ahapụ m ịhapụ ozi / echiche bara uru nke m ji n'aka otu ụbọchị m ga-achọpụta etu esi mechie ma nweta uru na ya. Elere m nke a anya site na isi ihe abụọ.
1. M na-enye echiche ndị ahụ dịka ị kwuru na ha ga-eme ya iji mee ka ọ rụọ ọrụ. Imirikiti anaghị agbaso, o yiri ka ọ bụ mgba maka ọtụtụ mmadụ.
2. M na-enye ihe echiche na dam ma ọ bụrụ na ha anaraghị ya ma soro ya gbaa ọsọ naanị ịbawanye ahịa ha. Enwetaghị m uru na nke a ma anatala m ọmarịcha onyinye na akwụkwọ ozi ekele.
Ezi post na jisie!